Computer Technical Notes & Sharing Softwares: June 2009
Eight Parts of Speech (၀ါစင်္ဂ ရှစ်မျိုး)
1. Noun (နာမ်) (N)
What is Noun? Noun is Name. အမည်ဟူသမျှကို နာမ်
Eg. Mg Mg, Ma Hla, student, book, university, home, world etc.
2. Pronoun (နာမ်စား) (Pron)
Subjective Objective Adjective Possessive Reflexive
You You Your Yours Yourself/lves
3. Adjective (နာမဝိသေသန) (Adj)
Eg. Good, Clever, Handsome, Beautiful, Easy, Interesting etc.
4. Verb (ကြိယာ) (V)
Doing Word=အလုပ်လုပ်သော စကားလုံး
Eg. Am, Is, Are/ Was, Were (V . Be)
Has, Have/ Had (V . Have)
Do, Speak, Read, Think etc. (V . Do)
5. Adverb (ကြိယာဝိသေသန) (Adv)
Adjective, Adverb, Verb modifier= နာမဝိသေသန၊ ကြိယာဝိသေသနအချင်းချင်း၊ ကြိယာကို အထူးပြုသော စကားလုံး
(1)Adv-က Adj-ကို အထူးပြု ပုံစံ
Eg. This book is very (adv) good (adj).
It wasarather (adv)difficult (adj)question.
The answer is quite(adv) clear(adj).
(2) Adv- အချင်းချင်း အထူးပြု ပုံစံ
Eg. I see him so(adv) often(adv).
I am feeling quite(adv) well(adv) today.
He walks very(adv) slowly(adv).
(3) Adv- က V- ကို အထူးပြု ပုံစံ
Eg. He speaks(v) quickly(adv).
You should read(v) this book interestingly(adv).
He explained(v) this point clearly(adv).
6. Preposition (ဝိဘတ် (သို့) ရှေ့ဆောင်ပုဒ်)(Prepo)
Relation word = ဆက်စပ်ပေးသော စကားလုံး
Eg. In, On, At, To, From, With, Near etc.
I get up at6o’ clock every morning.
7. Conjunction (စကားဆက်) (Conj)
Joining word =ဆက်ပေးသော စကားလုံး
Eg. And, Or, but, Because, If, After etc.
I went toamarket and boughtanotebook.
8. Interjection (အာမေဍိတ်) (Interj)
Expressing the sudden emotion = ရုတ်တရက် ခံစားချက်ကို မြန်မြန် ဆန်ဆန် ထုတ်ဖော်ခြင်း
Posted by SLIP at 12:08 PM0comments
Posted by SLIP at 4:31 AM0comments
Better left unsaid / unexplained / unhoped
မပြော / မရှင်းပြ / မမျှော်လင့်ဘဲထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
Nine times out of ten;
ဆယ်ကြိမ်မှာ ကိုးကြိမ်၊ အကြိမ်တစ်ရာမှာ ကိုးဆယ့်ကိုးကြိမ်
Given an opportunity /achance / circumstance,
အခွင့်အရေး / အခြေအနေ သာပေး(ရ)ရင်
(Only)adrop in the ocean / bucket
In appreciation of all you've done for us,
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ခင်များတို့အားလုံး လုပ်ပေးခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ (ပြောရရင်)
From every angle; In all its aspects,
No two ways about that
ဆူးကြားက ဗူးခါးလို၊ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာ အခြေအနေမှာ
ဒီနေ့ အများကြီး ပိုကောင်း(တိုးတက်)လာပါတယ်
From all walks of life; At all levels of society
အလွှာမျိုးစုံမှ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း အဆင့်အတန်းမျိုးစုံမှာ
Inapuddle of blood / sweat / tear
သွေး/ ချွေး / မျက်ရည်ဗွက်ထဲမှာ
Sleepless nights and endless tears / sorrow / reminiscence / remembrance
အိပ်မရတဲ့ ညတွေ နှင့် အဆုံးမရှိတဲ့ မျက်ရည် / သောက / အတိတ်ကို လွမ်းဆွတ်ခြင်း / အောက်မေ့သတိရခြင်းတွေ
So much that we still don't know / understand / learn
ကျွန်ုပ်တို့ မသိ / နားမလည် / မသင်ယူရသေးတဲ့အရာတွေ အများ(တစ်ပုံ)ကြီး(ရှိသေးတယ်)
With complete confidence / self-confidence
ယုံကြည်မှု / ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့
ကိစ္စအားလျှော်စွာ (သို့) ကိစ္စရှိရင်ရှိသလို
A man / thing beyond / without compare
အနှိုင်းမဲ့ လူတစ်ယောက် / အရာတစ်ခု
In the hope of the improvement of my English /
betterment of my life / winning her love
ကျွန်ုပ်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်ဖို့ / ဘဝ ပိုမိုကောင်းမွန်လာဖို့ / သူမရဲ့ နှလုံးသားကို ရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့(ဖြင့်)
With the help of my teacher / dictionaries
ကျွန်ုပ်ရဲ့ ဆရာ / အဘိဓာန်များ အကူအညီနဲ့
Bloody / bleeding love/money
သွေးစွန်းနေတဲ့ အချစ် / ငွေ
The blood-/ love-thirsty boy / girl / man / lady
သွေး / မေတ္တာ ငတ်မွတ် ဆာလောင်နေတဲ့ ကောင် / ကောင်မလေး / သူ / အမျိုးသမီး
However much you try / pay / say,
ခင်များ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား / ပေးပေး / ပြောပြော
Just about now; By now; At this time,
By accident; Accidentally; By chance;
A man / woman of the world
အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ သူ / အမျိုးသမီး
Byanose; By inches
နှာတစ်ဖျားလောက်နဲ့(ဖြင့်) ၊ ပွတ်ကာတည်ကာနဲ့ (ဖြင့်)
Time to start / rest / leave / get busy
စတင် / အနားယူ / ထွက်ခွါ / အလုပ်များဖို့ အချိန်ပဲ
No time to explain / waste / talk
ရှင်းပြ / ဖြုန်းတီး / စကားပြောဖို့ အချိန်မဟုတ်(မရှိ)
No time for apology /explanation / chit-chat
တောင်းပန် / ရှင်းပြ / စကားစမြည်ပြောဖို့ အချိန်မဟုတ်(မရှိ)
Time for (you) to go home / go to bed / stop it
မင့်အတွက် အိမ်ပြန် / အိပ်ယာဝင် / ဒါကို ရပ်ဖို့ အချိန်ပဲ
Just after lunch / work / 12 o' clock
နေ့လည်စာ စား / အလုပ် / ၁၂-နာရီထိုး ပြီးပြီးချင်း
Just before lunch / work / 12 o' clock
နေ့လည်စာ မစား / အလုပ်မလုပ် / ၁၂-နာရီ မထိုးခင်လေး
ထွက်သွားစမ်း (ငါ့ ကွယ်ရာတွင်)
ကွယ်မေ့ (တွေ့သေအောင်လွမ်း)၊ တစ်ချုံကွယ် တစ်မယ်မေ့ (တွေ့သေအောင်လွမ်း)
Just inasecond; Inaminute; Inawhile
Bit by bit; Step by step; Inch by inch;
Posted by SLIP at 12:07 PM0comments